Aluminum foornada barafku, Arc foornada, Automatic oo ildheer - Rongtai
Saaraha Professional of Kululaynta Qalabka Products ku dhawaad 22 sano. Our warshad ku yaalaa WeifangCity, Shandong. Akhri wax dheeraad ah
Our Factory ayaa koray galay Premier ISO9001: 2008 saaraha shahaado of tayo sare, soo saarka Kharashka-ku ool ah. Akhri wax dheeraad ah
Had iyo jeer wuxuu qadaray tayada ee meesha ugu horeysa oo si adag u kormeeraan tayada alaabooyinka ee geedi socodka kasta. Akhri wax dheeraad ah
In ka badan 22 sano, Rongtai ayaa diiradda on qalab deggan oo hufan Ji kululaynta induction.
Shandong Rongtai Induction Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1997, waa teknoolojiyad sare subordinating a ganacsi qaranka qalabka u-dhamaadka sare heer caalami manufacturer- Himile Group.
Induction MILMA foornada Aluminum Shell ku dhalaalisaa ...
Tan iyo dhisidii, Rongtai ayaa ilaaliyay wadada cusub oo madax banaan tiknoolaji iyo R & D. Waxay leedahay koox ka mid ah top-uruursanayey talanti farsamada warshadaha ee, oo uu aasaasay shaybaarka heer gobol ah, xarunta technology ganacsi heer gobol ah, cilmi injineernimada heer-degmada iyo xarunta horumarinta. Wakiil heerka sare ee technology induction-Ji gudaha iyo dibaddaba, ka qayb-eegis ee heerka qaran ah ee "National Industrial Electric Kululaynta Qalabka simayo Technology", "Frequency Dhexdhexaad Coreless Induction foornada" iyo "Nooca danab Conversion Frequency Frequency Dhexdhexaad Multiple Coreless Induction foornada Set Buuxi "Dhismaha heerarka isticmaalka tamarta ridaya Foornooyinka korontada.
Sida hoosaad muhiim ah oo Himile Group, Rongtai Induction Technology diiwaan caasimada of 10 million RMB. The laba warshadood oo dabooli aag guud ee 137,200 ㎡. Waxaa jira 5 workshops casri ah meel tirada guud ee 46,000 mitir oo laba jibbaaran, xafiiska dhamaystiran iyo goobaha taageeraya. wax soo saarka ugu weyn ee shirkadda oo ay ku jiraan qalabka induction inta jeer ee dhexdhexaad ah iyo taageerada qalabka qalabaynta, wax soo saarka asaasiga ah waa-dhamaadka sare foornada barafku induction, induction automatic foornada kululaynta, demin online iyo line-soo-saarka tempering, iwm, adeega shirkadaha badan-dhamaadka sare saarka mishiino guriga iyo dibadda.
Field ee waayo-aragnimo shaqo iyo aqoonta tagaan gacanta-in-gacanta
In 2003-04, shirkadda helay amar dhoofinta muhiim u ah sahayda, rakibaadda, guddiga hawlgalka & dayactirka geedka Drum Mix Asphalt at Dushanbe, Republic of Tajikistan for on mashruuca Airport.
Fulinta A guul iyo dhamaystirka si ay taasi keentay in mawjad cusub oo horumarinta ee shirkadda.
At shirkadda joogo riyaaqayaa caan weyn ee Nigeria, Tajikistan, Kazakhstan, Papua New Guinea, Seychelles & Malawi ay sabab u tahay wax soo saarka hufan sare iyo ka dib taageero iibka.
Heegan u bixinta ugu tayada sareeya iyo qalab-Ji tayada heerka caalami ee kharash-ool ah suuqa Chinese, iyo wakiil ka ah qalabka Shiinaha ee induction dunida, noqday heer caalami Ji qalabka saaraha ah.
Himile Group waxaa la aasaasay sanadkii 1995, waxa uu ku yaalaa Gaomi City, Economic Zone Blue Shandong. In ka badan 20-ka sano, sida shirkaddu ay ku si degdeg ah iyo si tartiib ah horumariyo heerka xarunta sanadlaha ah koritaanka ku dhowaad 50%. Hadda waxa uu leeyahay in ka badan 30 shuraakada, oo ay ku jiraan mid ka mid ah A-share shirkadda ku qoran (code stock 002595), afar shirkadood teknoolojiyad sare ee qaranka iyo shan shirkadood oo dibada. Himile daboolayaa meel ka mid ah 2.664.000 ㎡, shaqeeya in ka badan 10,000 oo qof oo uu leeyahay hantida guud ee 7.6 billion RMB. Waa lug saarka mishiino, injineernimada badda, gaadiidka tareenka, gaaska, waxbarashada iyo beeraha kale.
Mini Melting Furnace, Induction Metal Melting Oven, Melting Furnace Copper, Heat Daaweynta Induction foorno, Aluminum Shell Medium Frequency Furnace, Graphitization Furnace,